Fanatsarana ny tena | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Topic: tena fambolena
Fa maninona no ilay nofy? Manonofy nofy: kintana nitifitra amin'ny nofy
Posted on 15.09.2019 26.09.2019
Rehefa mamoaka ny dikan'ny nofy dia tsy maintsy jerena ny toetran'ny olona, ​​ny fisehoan-javatra alohan'ny fahitana amin'ny alina, ary ny drafitra hafa. Taratry ny ho avy ny zava-tsoa rehetra tsy fantatra. Raha mandray ireo famantarana avy any ambony ianao dia afaka manova ...
Empress: midika hoe (tarot). Tarika Emot: Zava-dehibe ao anatin'ny fifandraisana. Empressvertvert (Tarot): Midika
Posted on 15.09.2019 27.09.2019
Ny Major Arcana lehibe fahatelo ao amin'ny tokotanin'ny Tarot dia ny Emperora. Ekena amin'ny ankapobeny fa manondro ny maha-vehivavy, ny firindrana ary ny fiterahana. Famaritana ny karatra nalatsaka Matetika eo amin'ny karatra, ny Emperora dia aseho ho mipetraka amin'ny seza fiandrianana ...
Aisha: ny dikan'ny anarana sy ny fanoritsorany fohy
Misy anarana marobe eto amin'izao tontolo izao. Ny sasany amin'izy ireo dia mahazatra antsika, fa ny sasany kosa avy amin'ny kolontsaina hafa. Io ilay anarana hoe Aisy. Inona no dikan'izany, ahoana no andikana azy ...
Ahoana ny fomba hiantsoana ny Queen of the Spades. Fomba voaporofo mampatahotra
Iza ny Queen of Spades? Vehivavy tsotra avy amin'ny tokotanin'ny karatra ity. Fa maninona no matahotra azy ny olona rehetra, ary, hoy izy, fa tsy ny mpanjakan'ny angady? Ny sasany milaza amin'ity isa ity fa naseho tamim-pahagagana izy ...
Leysan: ny dikan'ny anarana, toetra, fiafarana ary fiaviany
Posted on 15.09.2019 28.09.2019
Ny dikan'ny anarana maro miaraka amin'ny faka atsinanana dia matetika mifandraika tsy amin'ny toetra fotsiny, fa koa amin'ny trangan-javatra voajanahary. An'izy ireo koa ny anarana Tatar Leysan. Leysan: ny dikan'ny anarana sy ny niandohany ...
Inona no nofinofin ny zana-boriky iray, ny gidro tamina ny atody iray teny an-tanany?
Fa maninona no manonofy ilay zazakely? Tsy mazava ny valin'io fanontaniana io. Satria io marika io dia voadika amin'ny fomba samihafa amin'ny boky nofinofy isan-karazany. Ary mba hahafantarana tsara ny fototr'ilay olana dia ilaina ny manondro ...
Fandikana sy ny hevitry ny Tarot: Chariot
Ny Chariot dia mitana toerana manokana eo amin'ny tokotanin'ny karatra. Tarot dia mampifandray ny dikan'ity sary ity amin'ny fahombiazana sy ny fandresena azo tamin'ny fifanandrinana matotra - tamin'ny asan'izy ireo sy ny heriny. Raha mandritra ny vintana ...
Mampifanaraka ny anarana Alexander sy Alexander. Ny dikan'ny anarana Alexander ho an'ny zazalahy. Inona no anaran'ilay tovovavy Alexander?
Posted on 15.09.2019 30.09.2019
Ny anarana nomena antsika rehefa teraka dia misy fiatraikany amin'ny fiainantsika manontolo. Noho izany, tena zava-dehibe ny tsy tokony ho diso hevitra amin'ilay safidy. Eny tokoa, ilay anarana dia misy fampahalalana izay iankinan'ny fiainantsika. Afa-tsy ...
Ahoana no ahatsiarovanao ny fiainana taloha? Ny alahelo lasa teo amin'ny fiainana taloha
Amin'ny dingana iray eo amin'ny fiainana dia manomboka mieritreritra fanontaniana lehibe toy izao ny olona: "Avy aiza ny olona?", "Tena manana fanahy ve isika tsirairay?", "Efa nisy ve ny fiainantsika talohan'io?" ary maro ...
Scorpio sy Taurus: fifanarahana amin'ny fitiavana sy ny fanambadiana
Posted on 15.09.2019 01.10.2019
Ny firaisana eo amin'i Scorpio sy i Taurus dia mety hitranga raha tena tadiavin'izy ireo izany ary hifanaraka. Izy ireo dia afaka mifanerasera am-pamokarana eo amin'ny sehatry ny famoronana ...
Rooster sy Monkey: mifanaraka amin'ny fanambadiana, fisakaizana ary asa aman-draharaha
Ny horoscope atsinanana dia mampiavaka ny olona mifototra amin'ny taona nahaterahana. Hita fa tsy mitovy amin'ny an'ny lehilahy sy ny vehivavy ny famantarana. Ity dia azo jerena tsara amin'ny mpivady Rooster sy Monkey. Miantso ny manam-pahaizana fa tsy mazava ny fampifanarahana an'ireo famantarana ireo. ...
Saint Lyudmila avy any Czech. Vavaka ho an'i Md Ludmila
Ny toetran'ny olombelona dia ilainy tsotra fotsiny ny fanohanan'ny fahefana ambony. Ny finoana an'Andriamanitra dia manome fanantenana ho an'ny olona sasany, faharetana ho an'ny hafa, fitiavana ary fanamafisana ny fanahy amin'ny hafa. Matoky ny Tompo foana ...
Ny sunnism dia iray amin'ny lalana lehibe amin'ny finoana silamo. Sunnism: famaritana, endri-javatra sy zava-misy mahaliana
Angamba tsy nisy fivavahana iray na iray aza tamin'ny tantarany nanalavitra fisarahana izay nanjary niforona fironana vaovao tao anatin'ny fampianarana tokana. Tsy ankanavaka ny finoana Silamo: amin'izao fotoana izao, misy antsasaky ny roapolon'ny fotony ...
Old Believer Cross: endri-javatra
Posted on 15.09.2019 03.10.2019
Ny lakroa taloha an'ny mpino orthodoksa dia manana endrika hafa kely amin'ny hazo fijaliana efatra izay mihanaka ankehitriny. Izy io dia manana hazo fijaliana roa amin'ny zoro sivifolo degre, izay midika ny takelaka ambony takelaka mifamatotra eo ambonin'i Kristy ...
Bouddha: fialantsasatra, fomban-drazana, fomba amam-panao
Posted on 15.09.2019 16.11.2019
Ny tantaran'ny Buddhism dia manana fotoana lava, ary koa ny mpanaraka maro ankehitriny. Ny fiandohan'ity fivavahana ity dia manana ny tantaram-pitiavam-pitiavany manokana, izay horesahina ato amin'ity lahatsoratra ity. Ao amin'ny…
Inona no mivavaka ao amin'ny kisary arikanjely Michael
Posted on 15.09.2019 06.12.2019
Ny sary masin'ny arikanjely arkanjely dia azo jerena amin'ny tombo-tsoa lehibe indrindra, any amin'ireo fiangonana kely amin'ny faritany ary ao an-tranon'ireo mpino. Fa maninona no mazoto sy hajain'ny Kristiana io maherifon'ny Baiboly io? Iza izy? Araka ny ...
Islandy mihazakazaka amin'ny andiany fotsy sy mainty
Posted on 15.09.2019 04.10.2019
Ny rune Islandey dia marika izay ampiasaina amin'ny tanjona majika, ary indraindray amin'ny endrika tatoazy. Mizara roa izy ireo: fotsy sy mainty. Mora ny maminavina fa ny fotsy dia ...
Andriamanitra Amona - mpanapaka any Egypta
Andriamanitra ejipsianina taloha tsy dia mahazatra loatra io. Ny anarany dia nadika hoe "miafina" na "tsiambaratelo", ary mandritra izany fotoana izany ny masoandro, ilay endrik'izy ireo, dia namirapiratra teo ambonin'ny lohan'ireo mpankafy azy, azon'ny maso rehetra jerena. Azy ...
Miankina amin'ny tantaram-pitiavana. Ny fampifangaroana hazakazaka sy ny dikany, ny vokatry ny fitiavana tantaram-pitiavana
Posted on 15.09.2019 05.12.2019
Magic dia nitana ampahany lehibe tamin'ny fiainan'ny olona iray, nanampy azy tamin'ny toe-javatra sarotra ary mpanohana azo antoka. Matetika ny razambentsika dia nitodika tany amin'ny fahefana avo kokoa mba hanampy, ary mbola velona mandraka androany ...
Famaritana nofy: inona no nofinofin'ny anjely. Ny dikan'ny sy ny fandikana ny nofy
Posted on 15.09.2019 05.10.2019
Fa maninona no manonofy ilay anjely? Ny sary maivana an'ny mpitondra hafatra any an-danitra dia misy fiatraikany amin'ny olona amin'ny ankapobeny. Nahita kerobima tsara tarehy tao anaty nofinofin'izy ireo izy ireo, dia nifoha tony ary niala sasatra. Na izany aza, mampanantena inona ny nofy amin'ny alina, ...
pejy 1 pejy 2 ... pejy 81 Next Page
77 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 1,003.